Chelsea Oo Wadahadal La Gashay Wakiilka Robert Lewandowski.
Home Wararka Ciyaaraha Chelsea Oo Wadahadal La Gashay Wakiilka Robert Lewandowski.
Chelsea ayaa wadahadalo la yeeshay wakiilka xiddiga Robert Lewandowski heshiis iman kara in la keeno weeraryahanka Stamford Bridge xagaagan.
Blues ayaa horay loola xiriirinayay weeraryahanka Borussia Dortmund Erling Braut Haaland , laakiin Der BVB ayaa lagu soo waramayaa inaysan dooneynin inay iibiso 21 jirkaan xagaagan, Thomas Tuchel ayaa la sheegay inuu u weecday meel kale.
Tababaraha Chelsea ayaa lagu soo waramayaa inuu diirada saari doono wadankiisa hooyo, isagoo lagu soo waramayo inuu Robert Lewandowski ka dhigayo mudnaanta koowaad, ka dib markii ciyaaryahanka reer Poland uu qaaday koobkiisii ​​9aad ee Bundesliga dhamaadkii xilli ciyaareedkii hore.
Sida laga soo xigtay Daily Mail , Blues ayaa wadahadal la yeelatay wakiilka Lewandowski oo ku saabsan u dhaqaaqista 32 jirkaan xagaagan, ka dib markii uu jabiyay rikoorka gooldhalinta Bundesliga xilli ciyaareedkii hore isagoo dhaliyay 41 gool 29 kulan oo uu saftay, kana sarre maray Gerd Muller 40 jir.
Ka dib bixitaankii Olivier Giroud iyo warar xan ah oo ku saabsan Tammy Abraham xagaagan, Tuchel wuxuu doonayaa inuu ku daro xulashooyinkiisa weerarka, iyadoo Lewandowski lagu soo waramayo inuu mudnaanta siinayo inuu soo galo oo uu hogaamiyo safka xiddigaha haatan jira sida Mason Mount , Timo Werner iyo Kai Havertz .
Iyadoo labo sano ay uga harsan tahay qandaraaskiisa Bayern Munich, kooxda Bavaria ayaa la sheegayaa inay aad u dooneyso inay sii dheereyso joogitaanka Lewandowski, lakiin waxaa lagu soo waramayaa inay isku dayeyso inay bixiso lacag qaali ah hadii ciyaaryahanka reer Poland uu muujiyo inuu doonayo inuu u dhaqaaqo kooxda heysata horyaalnimada Yurub xagaagan.
Previous articleRaheem Sterling oo ka mid ah ciyaartoyda ay Manchester City ku dari karto dalabka Harry Kane
Next articleLiverpool oo dalabkeedii ugu horeysay ka gudbisay xiddiga Atletico Madrid Saul Niguez.